Hal qof oo ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandHal qof oo ku dhintay qarax ka dhacay magaalada Boosaaso
October 24, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Qarax ayaa maanta oo Talaado ah ka dhacay magaalada Boosaaso, sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka.
Qaraxa ayaa waxaa ku dhintay hal qof oo ahaa ninkii qaraxa waday, sida ay saraakiil katirsan ciidanka booliiska ay u sheegeen warsidaha Puntland Mirror.
Ciidanka booliiska saldhiga Boosaaso ayaa joojiyay ninka qaraxa waday oo loo maleynayo in bartilmaameedku ahaa.
Haayadaha ammaanka ayaa wada baaritaan ku saabsan qaraxa.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ururka hubaysan ee Al-Shabaab ayaa maarkii ugu horeysay soo bandhigtay sawirka rasmiga ah ee hoggaamiyaheedii hore Axmed Cabdi Godane oo loo yaqaan (Abu Subayr). Godane oo sanadkii 2007-dii loo doortay hoggaamiyaha Al-Shabaab ayaa lagu [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Shirkii madasha maamul goboleedyada Soomaaliya oo maalmihii u dambeeyay ka socdaya magaalada Garoowe ayaa maanta oo Khamiis ah la soo gabgabeeyay. Madaxweynayaasha Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Puntland oo martigelinaysa ayaa ka soo [...]